विचार Achives| Page2of 13
‘पुनरकर्जा गरिव, विपन्न वर्ग र साना तथा मझौला उद्योगको उत्थानकै लागि हो’
गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको कार्यक्रम अघि सारेको हो । चार/पाँच वर्षको अवधीमा पुनरकर्जाको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म १० अर्ब रहेको कोष अहिले ४४ अर्बको पुगेको छ । चैत १६ गतेको सर्कुलर अनुसार …
राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजः वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो पर्छ असर ? बैंकर मीनराज पोखरेलको विचार
लगभग ५ महिना देखि विश्व कोरोना संक्रमणका कारण आतंकित छ । चाहे आर्थिक रुपमा सम्पन्न तथा शक्तिशाली देश होउन चाहे आर्थिक रुपमा कमजोर देश होउन यस महामारी वाट सबै पीडित भएको सन्दर्भमा नेपाल पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाववाट अछुतो रहन सक्ने …
संकटमा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई जोगाउने उपयुक्त विधि हुनसक्छ ‘काम घरबाट’
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दै विश्वमा आर्थिक मन्दीको सिर्जना गरेको छ । यसको परिपूर्ति गरी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन लामै समय लाग्ने देखिन्छ । नेपाल पनि यस महामारीको असरबाट अछुतो छैन । गएको चैत्र ११ गतेदेखि …
गभर्नरको अधिकांश सम्पति श्रीमतीको नाममा, ८९ लाखको टोयोटा कार, १० ठाउँमा जमिन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२ को उपदफा ३२(४) अनुसार गभर्नर अधिकारीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार गभर्नर अधिकारीको अधिकांश सम्पति उनकी …
‘चालु खर्च ३० प्रतिशत कटौती, ५० अर्बको रोजगार कोष र निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गरौं’
कोरोनाका कारण समग्र नोक्सानी कति हुन्छ ? सबै क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर वृहद अध्ययन गरिनुपर्छ । कोरोनाका कारण गैर वित्तिय प्रभाव पनि वित्तिय जोखिमका रुपमा आउनेछ । अन्त रोजगारी गुमेपछि सबै भन्दा चाप पर्ने भनेको सरकारी निकायमै हो । कोरोनाका सवालमा अहिलेसम्म …
‘अपुरो सपना छोडेर गएँ, ज्योतिलाई अझै चम्काउनुहोस्’
ज्योति बिकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो कार्यकाल बैशाख १५ गतेसम्म रह्यो । दुई बर्ष कार्यकाल पुरा हुनुसंगै बैंकबाट विदा हुने समाचारहरु प्रकाशित भएपछि बैंकका साथीहरु तथा मेरा शुभचिन्तकहरुको अनगिन्ती फोनहरु आएर एकछिन पनि काम गर्न नपाएको अवस्था सिर्जना भइ मैले फोन …
‘नयाँ पोलिसी बिक्रि भएको छैन्, बीमा कम्पनीको नाफा पक्कै घट्छ’
सबै क्षेत्रमा लकडाउन छ । न्युनतम रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर केहि काम गरिरहेका छौं । जीवन बीमा तर्फ प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गरिदिएका छौं । अहिले नयाँ पोलिसी किन्न सकिने अवस्था छैन् । निर्जीवन तर्फ भने अनलाइनबाट बेच्न भनेका छौं । सबै …
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ५ वटामा झारौं, उत्पादन र आपूर्तिमा ध्यान दिऔं
सरकार बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ । यतिबेला पैसाको आवश्यकता बढेको छ तर राजश्वको श्रोत कम हुने देखिन्छ । यसपाली राजश्वमा हुने कमीले अर्काे वर्षलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसकारण आगामी बजेट एक दमै चुनौती पूर्ण अवस्थामा ल्याउनुपर्नेछ । सरकारले धेरै महत्वकांक्षी बजेट …
‘यसपाली कर बढाउने ठाउँ छैन्, बजेटको आकार अझै घटाऔं’
कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाईदिएको छ भने मानव सभ्यतामाथी ठूलै चुनौती निम्त्याएको छ । यस अघि यस्ता महामारीहरुले गरिब देशहरुलाई पिरोल्ने गरेको थियो तर यसपाली शक्ति राष्ट्रहरुलाई अझै धेरै पिरोलेको छ । यसले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनका संकेतहरु देखाईरहेको छ भने मानव जातिका …
कोरोनापछिको संभावित आर्थिक संकटबाट जोगिन कृषिको पुन:उद्धार गरौं
प्रकोपको समयमा खाद्य सन्तुलन गुम्दै खाद्य सुरक्षामा चुनौती हुनु स्वभाविक हो । तर खडेरी, बाढी पहिरो, डुवान, शितलहर, भूकम्प, हावाहुरी, असिना, लू, र बेलाबेलामा निस्कने बाली एवं पशुपंक्षीका रोग जस्ता प्रकोपको तुलनामा कोरोनाको महामारी अत्यास लाग्दो भइसकेको छ । कोरोना महामारीले कृषि क्षेत्रलाई …
कोरोना महामारीले उद्योग प्रतिष्ठानहरुको मानव संशाधनमा पारेको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले हाम्रो देशका उधोग प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मानव संशाधन विभागमा पार्ने प्रभावका बारेमा विविध छलफलहरु यस क्षेत्रमा क्रमिकरुपबाट दैनिकरुपमा भइरहेको पाइन्छ । २१औं शताब्दीमा महामारीको रुपमा विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले हामी नेपालीलाई पनि अछुतो छोडेको छैन । यो कुन हदसम्म कहाँसम्म …
संकटको बेला गणतन्त्र र संघीयता झन भद्दा देखियोः डा. पौडेल
सबैतिर उस्तै, सरकार पनि छ कि छैन जस्तो। जताततै बर्बाद भएपछि मात्र, गर्छ सुने जस्तो। के सरकार के प्रतिपक्ष, के नेता के कार्यकर्ता, के पत्रकार के मजदुर नेता, अहिले धेरैको भरोसा नभएको र कैयौँ अलमलिएको समय हो यो । कोरोना संकटले छिमेकी भारतलाई …